CAD / GIS-Teaching - Page 2 - Geofumadas
Master-ka ee Qorsheynta iyo Qorsheynta Magaalada [UJCV]
Tani waa mid ka mid ah ugu xiisaha badan ee degrees sayidkiisa Central America, ka fiirsaneysa inay muhiimadda ay dawladaha hoose iyo degdeg maldahan nidaamo lacag karin in maamulka dalka iyada oo diiradda la on horumarka aadanaha. Waxay timaaddaa waqti xiiso leh, marka José Cecilio del Valle University cusbooneysiinayo ...
5 Koorasyo ​​Online ah oo loogu talagalay Cadastre - aad u xiiso badan
Waxay ku qanacsan tahay in aanu ku dhawaaqeyno in Machadka Lincoln ee Siyaasadda Dhulka uu qabanayo hawlo waxbarasho oo kala duwan oo ku yaal Latin America, oo ay ku jiraan koorsooyinka fogaanta internetka. Munaasabaddan waxa uu ku dhawaaqay kobcinta cusub ee koorsooyinka kuwaas oo laga bixin doono 2 ilaa 18 ee November ee 2015. Xidhiidhada hoos ku qoran waxay horseedi karaan goobaha ...
horumarinta Software Free sida engine ah ee isbedelka
Ku dhowaad wax kastoo diyaar u ah 7as gvSIG Latin America iyo Caribbean, kaas oo lagu qaban doono Mexico. Waxaan aaminsanahay in si tartiib tartiib ah ee hay'adaha dawliga ah, oo ay gacanta ku hayaan software gaar ah, ayaa ah geeddi-socodka xaaladaha badanaa laga soo bilaabo hirgelinta mashaariicda maal-galinta caalamiga ah ee ...
Xogta Khariidadda ee Maktabadda Perry-Castañeda waa mid la taaban karo oo wax ku ool ah oo ka kooban khariidadaha 250,000 ee la baaray loona diyaariyey online. Qaar badan oo ka mid ah khariidadahani waa kuwo guud iyo, hadda, waxay heli karaan meel u dhow 25,000. Tusaale ahaan, waxaan tusi doonaa qaar ka mid ah khariidadaha la heli karo ee ...
Isku xirnaanta Jinsiyadaha - Maadada Geomatics ee Bandhiga Sayniska Cilmiga Computerka 2016
Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqo in Guddiga qabanqaabada IX Caalamiga ah ee IOM ee GEOMÁTICA 2016 ay ku dhawaaqday qaabka XVI Heshiiskii iyo Cunnada Caalamiga ah ee Sanadka soo socda. Dhacdadani waxay ka dhici doontaa Havana, laga bilaabo 14 illaa 18 bisha Maarso, iyada oo la adeegsanayo mawduuca dhexe ee "Connecting Societies". Mawduucyada ...
Baridda CAD / GIS, tabo cusub
University of Burgos leeyahay iskaashi xiiso leh Jiaotong University Chongqing ee Shiinaha, halkaas oo Shahaadooyinka of Engineering Technology Highway iyo heerka uu Civil Engineering ee Shiinaha waxaa lagu bixiyaa, waxa ay u malaynayeen oo ku saabsan qiyaas caalamiga ah ee hadda jira iyo kuwa mustaqbalka xirfadda. Degree ee Engineering ...
Baridda CAD / GIS, Engineering, dhowr
koorsooyinka GIS 9 janjeedha maamulka khayraadka dabiiciga ah
Bixinta tababbarka internetka iyo waji-horaadka ee codsiyada Geo-Engineering waa mid aad u ballaaran. Waxaa ka mid ah soo jeedinnooyin badan oo jira, maanta waxaan rabnaa in aan soo bandhigno ugu yaraan sagaal kooras oo leh maareyn khayraadka dabiiciga ah, saddexda shirkadood oo leh bandhigyo xiiso leh. Machadka sare ee deegaanka ...
Koorsada AutoCAD ESRI Masters QGIS
Dhacdada Bentley Connecting Event
Badeecooyinka waaweyn ee Bentley Systems waxay ilaa hadda yihiin, Microstation, ProjectWise iyo AssetWise, kuwaana waxa ay ka dhigeysaa dalabkeeda meelo kala duwan ee Geo Engineering. Sidii aan kuu sheegay sanad ka hor, Bentley wuxuu ku daray khadka afaraad ee ku saabsan waxa uu ugu yeeray Connnect. Inta u dhaxaysa bilaha May iyo ...
Baridda CAD / GIS, tabo cusub, Microstation-Bentley
Ku dhawaaqay bilowga habka diiwaangelinta koorsooyinka waxbarashada masaafada of gvSIG-Tababarka, la 2014 goynta labaad, taas oo ay qayb ka yihiin Barnaamijka dalab Certification of Association gvSIG ah. Maalinta tobnaad ee mashruuca gvSIG, koorasyo ​​badan ayaa leh sicir-dhimis, kooras bilaash ahna waxaa ku jira ...
Furitaanada Toddobaadka Waalidiinta MundoGEO
MundoGEO waxay kobcisaa toddobaad gaar ah oo ah seminaaro online ah oo laga bilaabo 9 ilaa 13 bisha September. Tirada diiwaangelinta ayaa ka 2,5 kun maray MundoGEOrealizará ah "Week of Webinars MundoGEO" 9 13 si September. Diiwaangelintu way furan tahay oo waa in lagu sameeyaa xiriirinta seminaarka internetka oo dhan.
Joornaalada Geoodhiga ayaa si tartiib tartiib ah u kobciyay jadwalka sayniska kuwaas oo qeexaya wax badan oo ku saabsan horumarka teknoolajiyada iyo falsafadda sayniska ee ku saabsan sayniska dhulka. Isbedelada hadda jira ayaa lagu diley joornaalada la daabacay ee taariikhda weyn, waxay dib u soo celiyeen mawduucyada muhiimka ah ee daabacaadaha kale oo la xiray ...
Tusaalaha Cadastral: Webinar
Nidaamka cadawga ee wadajirka ah waa jimicsi oo ay degmooyinku abuurayaan sii jiritaanka mashaariicda cadawga ee ka dhexeeya dawladda dhexe.
Boggii hore Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 ... Page 9 page Next